TGuff - Page3of 24 - the world is virtual reality
जो जिउने कला सिकाएर विदा भए
Wed Sep 230Comments
जसले आफू बौद्ध हुँ भनेर कहिल्यै स्विकारेनन् तर विश्वभर बुद्धको शिक्षा फैलाए। जसले सम्प्रदायको साँघुरो घेरा कहिल्यै निर्माण गरेनन्, बरु सबै देशका मान्छेमा आश्चर्यजनक गहिराइबाट स्वतन्त्रताको चेतना जगाइदिए। जसको जीवनको सार भन्नु नै सबै वर्गका मानिसलाई समान ढंगले दुःखबाट आनन्द, घृणाबाट स्नेह करूणा अनि बन्धनबाट स्वतन्त्रताको बाटो देखाउनु रह्यो। विश्वका करोडौं गृहस्थसम्म विपश्यना ध्यान पुर्‍याउने […]
नेपालीलाई कोरोना भ्याक्सिन: संयन्त्र छ, पाउने मिति छैन
Sat Sep 190Comments
कोरोना भाइरसबाट दैनिक ८—१० नेपालीले ज्यान गुमाइरहेछन्। शनिबार ११ जना मृतक थपिएसँगै एउटा सानो भाइरसबाट ज्यान गुमाउने नेपाली चार सय नाघेका छन्, संक्रमित ६२ हजार बढी पुगेका छन्। नागरिक जीवन बचाउन, निर्धक्क सामान्य जीवनयापनमा फर्किन भ्याक्सिन नभइ नहुने भए पनि नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन प्राप्तिको विषय राष्ट्रिय बहसमा छैन। नागरिक मृत्युको श्रृंखलामा ब्रेक लगाउन नभई नहुने […]
News coronavirus-vaccine covid-19-vaccine gavi nepal who
बादलुको घुम्टोले सगरमाथा छोपिँदा (फोटो)
Thu Sep 100Comments
दिल्लीमा विद्यार्थी छँदा धेरैले सोध्थे नेपालमा जन्मेर पनि सगरमाथा गएको छैनौ? मामुको ढावा जमघटमा साथीहरु घुमेका ठाउँको चर्चा उत्साहसाथ गर्थे। कतिले पदयात्राका कथा दक्षिण भारतीय फिल्मी शैलीमै सुनाउँथे।
Guest Pen LifeStyle earth-highest-mountain everest-base-camp mount-everest
नेपालीले कोरोना भ्याक्सिन कहिले पाउँछन्?
Fri Aug 280Comments
अक्सफोर्डकी एक वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायलमा संकलित रगत नमुनामा काम गर्दै। तस्विरः एपी नेपालमा कोरोना केस देखिएको ९ महिना पुगे पनि भ्याक्सिन ल्याउनेबारे अचम्मको शून्यता छ। कहाँबाट, कसरी अनि कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने? सबै चुपचाप छन्। आउने पुसदेखि कोभिड—१९ भ्याक्सिन उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया प्रक्षेपणहरु छन्। अनि ठूला, साना, धनी, गरिब सबै देश पहिला आफू चाहिरहेछन् भ्याक्सिन। […]
अकल्पनीय विपतपछि पनि बाँकी रहन्छ खुशी
Thu Aug60 Comments
नेपालमा नयाँ संविधानमा महिला प्रतिनिधित्वको बहस चलिरहँदा सन् २०१३—२०१४ मा बाँकी विश्व अर्कै चर्चा गरिरहेथ्यो। एउटा बुक आधारित। बच्चाबच्ची, परिवार र सम्बन्धहरुको झन्झट समाना गर्दै एउटी कामकाजी महिलाले नेतृत्वदायी भूमिकातर्फ कसरी झुकाव बढाउने? कार्यस्थलमा महिलाले सामना गर्नुपर्ने विभेद के हुन्? फेसबुक सीओओ सेरियल सेन्डबर्गको ‘लीन इन’ एउटा यस्तै बुक हो जसले कामकाजी महिलाका चुनौती र […]
Literature building-resilience facebook facing-adversity finding-joy sheryl-sandberg surveymonkey